Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 2t l0713 zom
Lesona 07 : Vahoaka nofidin'Andriamanitra manokana (Mika)
11 - 17 Mai 2013
Zoma 17 May
“Raha fantatr’i Jerosalema izay tombontsoany ny nahafantatra izany, ka nitandrina ny fahazavana izay efa nalefan’ny lanitra izy, dia nety ho nijoro hatrany ao amin’ny fahombiazany nireharehany, ho toy ilay mpanjakavavin’ny fanjakana nanana malalaka ny hery teo amin’ny fahefana nomen’Andriamanitra azy. Tsy hisy miaramila mitam-piadiana mijoro eo am-baravarany... Nijoro nanoloana ny Zanak’Andriamanitra ny anjara be voninahitra izay nety ho fitahiana ho an’i Jerosalema raha nanaiky ny Mpanavotra azy izy. Hitany fa nety ho sitrana tamin’ny aretina mafy nanjo azy izy tamin’ny alalany, ho afaka amin’ny fanandevozana izy, ary ho tafatsangana ho renivohitry ny tany matanjaka. Avy ao amin’ny mandany no hanidina ho amin’ny firenena rehetra ny voromailala mitory fiadanana. Izy no ho satroboninahitr’izao tontolo izao.” — IFM, EGW, t. 614.
Raha tianao ny hahatakatra ao anatin’ny tontolon-kevitra môderina kokoa ny fahoriana izay mazàna niaretan’ireo mpaminanin’ Andriamanitra dia vakio ny boky Life Sketches nosoratan’i EGW. Inona no ampianarin’io boky io mikasika ny zava-tsarotra sy fitsapana mety hatrehin’ny mpitondra hafatr’Andriamanitra mahatoky?
Mora tokoa ny ho tafalatsaka amin’ny fanarahana endri-pivavahana sy fombafomba ary fihetsika ivelany, izay mety ho tsara avokoa. Kanefa, etsy an-danin’izany, inona no mitranga rehefa tonga tanjona kendrena ireny fomba amam-panao ireny fa tsy mampitodika antsika amin’izay tena heviny mba hahatonga antsika hanaraka ilay Andriamanitra izay tompointsika amin’ny alalan’ireny fomba ireny?
Diniho misimisy kokoa ny foto-kevitra momba ny nahatongavan’Andriamanitra ho nofo, ny foto-kevitra ny amin’ny nitafian’Ilay Andriamanitra Mpahary ny vatana maha-olombelona antsika. Hoy ity mpanoratra iray: “Tao Aminy tamin’ny fahafenoany ny maha-Izy Azy, ary nentiny teo amin’ny tenany izay tsy naha-Izy Azy,” dia ny maha-olombelona antsika izany. Saintsaino izay ambaran’izany fahamarinana mahatalanjona izany momba ny fitiavan’Andriamanitra antsika. Nahoana izany fahamarinana izany no tokony hahatonga antsika ho feno fanantenana, sy fankasitrahana ary fiderana na manao ahoana na manao ahoana toe-javatra atrehintsika?